विर हस्पिटल को आकस्मिक कक्ष, निकै नै दौड धुप छ । डाक्टरलाई, नर्सलाई भ्याइनभ्याइ छ, परिचय नखुलेको एक अपरिचत को शरीरमा धुकधुकी बाँकि छ । डाक्टरहरु उसलाई बचाउन प्रयासरत छन्, तर अफसोच हस्पिटल मा उसलाई चिन्ने कोही छैनन् । एउटा लावारिश नै भन्दा पनि हुन्छ, यतिखेर सम्म पनि परिचय खुल्न सकेको छैन उसको ।
उसलाई राखिएको कक्ष को एक कुना मा उसलाई बाटो मा भेटेर उपचारार्थ ल्याउने नर्स शैली उभिएकि छिन् । शैली को हात मा एउटा डायरी छ, जुन घटनास्थल मा उक्त अपरिचित सँगै फेला परेको थियो तर त्यसमा कहिँ पनि नाम लेखिएको छैन तर दर्जनौँ पेजहरु भरिएकाछन्। शैली विर हस्पिटल कै नर्स हुन्, उपचार मा उनी आफ्नो संलग्नता जनाउँदैछिन् । शैली ले त्यो घाइतेलाई कुपण्डोल को बाग्मती पुल मा भेटेकि थिइन ।
भर्खर झिसमिसे साँझ परेको थियो, एउटा बत्तासिएर गएको निजी गाडिले उसलाई अर्थात रविलाई ठक्कर दिएको थियो, ऊ ढुन्मुनाउँदै लड्यो, त्यो निजी गाडि एकपटक पनि नरोकिइ पत्पत धुवाँ उडाउँदै कुद्‍यो । त्यही गाडि पछि पछि ट्याक्सीमा आउँदै गरेकि शैली ले घाइतेलाई देखिन्, अनि आफ्नो, एउटा नर्सको दायित्व निभाउन, त्यो घाइतेलाई विर अस्पताल को आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याएकी थिइन् ।
बेडमा लम्पसार परेको घाइते रवि को अनुहार उज्यालो र चम्किलो छ, तर उसको अवस्था ठिक छैन, जे जस्तोसुकै भएपनि डाक्टरहरु ले आश मारेका छैनन् । रवि गहिरो निन्द्रा मा रहेको छ, तर अनुहार हेर्दा लाग्छ अहिले नै उठेर बोलीहाल्छ, मुस्कुराए झैँ लाग्दै छ ।
रात छिपिँदै छ, बाहिर कोलाहाल, होहल्ला र फोहोर को डंगुर छ । विर हस्पिटल को कम्पाउन्ड बाहिर यौनकर्मी महिलाहरु को भीड छ, उनीहरु आफ्नो शरीर को यति र उति दाम लगाउँदैछन् । पछाडि भित्ता मा टोलसुधार समितिले “यो ठाउँमा यौन कार्य गर्न मनाही छ” भनेर लेखेको छ । तर यौनकर्मी महिलाहरु हस्पिटलकै कम्पाउण्ड को आड लिएर आफ्नो दामकाम गरिरहेकाछन् । वटुवाहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न हतार गरिरहेकाछन् ।
अरुका भाग्य बताइदिनेहरु, हातहेरिदिनेहरु पनि अब फुटपाथबाट उठ्दैछन्, उनीहरु को आफ्नै ठेगान छैन तर सबैका भविष्य बताइदिनेगर्छन् । माथि आकाशे पुलका पसलहरु पनि उठ्दैछन् । आकाशे पुल मा निलो चलचित्रका सिडि बेच्नेहरु भने,विस्तारै “दाइ, नेपाली ब्लु – नेपाली ब्लु” भनेर हात मा सिडि थमाउन खोज्दैछन्, वटुवाहरुलाई सिडि बेच्न खोजिरहेकाछन् ।
खुलामञ्चमा कुनै पार्टिको आमसभा रहेछ, त्यहाँ बाट पनि मान्छेहरु धमाधम निस्कँदैछन्, यसकारण पनि विरहस्पिटल बाहिर मान्छेहरु को धेरै भिड छ । पर महांकाल को मन्दिर बाट मधुरो घन्टिको आवाज सुनिँदैछ, सडक बालबालिका झुण्ड झूण्ड मा छन् । महांकाल को अगाडि अशक्त, असहाय माग्नेहरुको भिड देखिन्छ, बत्तिको उज्यालो मा । सँगै रहेको सैनिक मञ्च को गेटमा एक सैनिक जवान पहरा दिइरहेकाछन् । गाडिहरु आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेकाछन्, मोटरसाइकल चालकहरु नियम मिचिरहेकाछन् । अनि वटुवाहरु पनि आकाशे पुल छाडेर, सिधै तलबाटै व्यस्त सडक काटिरहेकाछन्, तर छेउ को भित्तामा लेखिएको छ, “बाटो काट्न आकाशे पुलको प्रयोग गरौँ” ।
डम्पिङ साइट का स्थानिय सँग को विवाद अनि महानगरपालिका कै कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण फोहोर को डंगुर सडक छेउ थुप्रिएको छ । त्यो फोहोर को सिधा असर हस्पिटल मा परिरहेको छ, हस्पिटल को वाताबरण नै दुषित बनिरहेको छ । सबै, नाक थुनेर हिँडिरहेकाछन् ।
रत्नपार्क तिर पनि भिडभाड नै छ । माइक्रो, टेम्पो र बसहरु एकहोरो हर्न बजाइरहेकाछन् । लगनखेल, सातदोबाटो, नयाँवानेश्वर, कोटेश्वर भन्ने आवाजहरु धेरै सुनिँदैछन् । उता पारिपट्टि रानीपोखरी को डिलमा रहेको शान्तिवाटिका मा गणेशमान सिंह उभिइरहेकाछन् । अनि उनकै सालिक को तल एउटा संगठन विभिन्न मागहरु राखेर रिले अनशनमा बसेकोछ । हिँड्नेहरु पनि अचम्म मानेर हेर्छन्, ती अनशनकारी को अगाडि पनि त्यही फोहोर को डंगुर थुप्रिएको छ ।
उता रत्नपार्क भित्र “मुकुन्दे” को भाषण सकिएको छ । खासमा मुकुन्दे रत्नपार्क भित्र एउटा रुखमाथि चढेर दिनहुँ भाषण गर्ने गर्छ, सबै भन्छन् मुकुन्दे खुस्केट हो तर उसको क्रेज बढ्दैछ । मुकुन्दे रुखमा चढेर भाषण गर्न थालेपछि वरिपरिका सबै मानिस भेलाभएर उसको भाषण सुन्न थाल्छन् । सबैकुरा प्रस्टरुपले भनिरहेको छ, अनि सबैकुरा सत्य छन् तर पनि उ एक सन्काहा र पागल नै हो । तर अहिले रात परेकोले मुकुन्दे पनि वासस्थान खोज्दैछ, रात काट्न का लागि ।
हस्पिटल मा घाइते रवि छट्पटाइरहेको छ, सायद मृत्यु को याचना गरिरहेको होला, डाक्टरहरु उसलाई बचाउन प्रयासरत छन् । एउटा जिवन र मृत्यु सँग संघर्ष गरिरहेको छ तर सहर मदमस्त बन्दै छ । रातसँगै रात्रिजिवनमा रमाउनेहरु सल्बलाउँदैछन् । न्युरोड गेट तिर पनि भिडभाड छ , केटिहरु को जमात छ, सायद उनीहरु काठमाडौँ का सम्भ्रान्त परिवारका छोरीहरु हुन्, जो रात्रिजिवनमा मदमस्त हुने सुरमा छन् । केटाहरु को हुल पनि कम छैन, केटाहरु को हुल तिनै केटीहरु को पछि पछि लागेको छ । केटिहरु पनि के कम, ती केटाहरु आफ्नो पछि पछि आउँदैछन् कि छैनन् बेलाबेला मा चियो गर्दैछन्, अनि छिल्लिएर नानाथरी बोल्दैछन् ।
घन्टाघर ले ९ बजेको संकेत बजाइसकेको छ, सडकमा मान्छे र गाडिको संख्यामा कमि आएको भएपनि, फोहोर को दुर्गन्ध टाढासम्म फैलिएको छ । लोडसेडिङ को समय नपरेकोले बत्तिको उज्यालो छ, बत्तिको उज्यालो मा पानी नभएको रानीपोखरी टल्किएको छ । अनि हस्पिटल को क्यालेन्डरमा चैत महिना पल्टिरहेको छ ।
जिन्दगी को भरोसा नहुने रहेछ, जतिखेर जे पनि हुनसक्छ, जिन्दगी मा पुर्णविराम लाग्न सक्छ । केही घन्टा अघिसम्म रवि पनि ठीकै थियो, अरु जत्तिकै सबल थियो, सक्षम थियो, एउटा राम्रो पेशामा थियो । तर अहिले एकैछिन को हतार भनौँ या एक निमेष को घटनाले उ जिवन र मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेको छ । घन्टाघर ले १२ बजेको संकेत गर्‍यो, मध्यरात मा सारा सहर लगभग मस्त निन्द्रा मा छ तर हस्पिटल मा कोलाहाल छ, रुवाबासी चलिरहेको छ । पलपल मा भर्ना भइरहेकाछन्, अनि केही पलपल मा सारा संसारलाई चटक्क छाडेर निकै लामो यात्रामा निस्किरहेकाछन्, कहिले नफर्किने गरि । रविको पनि कुनै ठेगान छैन, उ पनि उसको मायालाग्दो परिवारलाई चटक्क छाडेर कहिले नफर्किने गरि यात्रा मा जानसक्छ । घरपरिवारलाई रुवाउँदै उ निकै टाढा जानसक्छ, तर यो सहरलाई केही फरक पर्ने छैन ।
यहाँ पलपल मा नयाँ जन्मिरहेछन् अनि पलपल मा टाढा भइरहेकाछन्, मरिरहेकाछन् । तर सायद यतिखेर सम्म पनि उसको परिवार भने बेखबर हुन सक्छ किनभने उसको परिचय खुलेको छैन । अनि यो सहरमा यस्ता दुर्घटनाहरु दर्जनका संङ्ख्यामा हुन्छन् , यहाँ को मर्छ को बाँच्छ केही ठेगान छैन । हस्पिटल मा एउटा मरिरहेछ, सहर मस्त निन्द्रामा छ, फेरि भोलि त बिहान हुँदैछ ।
फोटो: फ्लिकर डटकम
Anonymous March 16, 2009 at 4:50 PM
Feels like narrator is someone having great knowledge about the running world which is so much absurd. May be life is like this when one borns, the same moment other dies! The story is potraying the reality. So the story can be read as another realistic story, form accident to prostitutes to blue movies to girls enjoying night life...to someone giving speech to Ganesh Man singh...
And above all the instance of "Ghantaghar" time and again reminding us the "time" that is running and Ravi is counting minutes of his life....
Anonymous March 16, 2009 at 7:13 PM
कथा ले मन छोयो....तर जति दुखी भए नि बास्ताबिक्तालाई त स्वीकार गर्ने पर्छ...
Anonymous March 16, 2009 at 7:27 PM
AAKAR jee ,
Katha ta man chune khalko rahecha aakarji, Photo ta jhatta herda kasto darlagdo halnu bhayeko, tar katha padhisake pachi photo bhava khulne rahecha.
Ani Aakar jee Thanks For Inform me about the problem in my Blog. I think, i have fix it. Hope you will let me know if there is still same problem.
Anonymous March 16, 2009 at 7:55 PM
कथा वास्ताबिक्ता सँग निकै नजिक छ, लेखाई राम्रो र सरर बगेको छ ।
डीआर न्यौपाने'सूर्य' March 16, 2009 at 8:04 PM
मलाई त कुनै घटना जस्तो नै लागेको थियो तर अन्त्यमा कथा पो रहेछ वास्तबिकता बोकेको कथा । आकार जी धन्यबाद ।
Anonymous March 17, 2009 at 6:26 AM
कथा एकदम राम्रो छ
Dilip Acharya March 17, 2009 at 9:28 AM
म पनि आधासम्म त साँच्चिकै घटना होला भनेर पढ्दै थिएँ। समसामयीक बिषयबस्तुको सशक्त चित्रण ।
Prabesh March 18, 2009 at 12:44 AM
कस्तो राम्रो कथा !!!
rajankathet March 27, 2009 at 9:20 PM
"एउटा जिवन र मृत्यु सँग संघर्ष गरिरहेको छ तर सहर मदमस्त बन्दै छ । अनि यो सहरमा यस्ता दुर्घटनाहरु दर्जनका संङ्ख्यामा हुन्छन् , यहाँ को मर्छ को बाँच्छ केही ठेगान छैन । हस्पिटल मा एउटा मरिरहेछ, सहर मस्त निन्द्रामा छ, फेरि भोलि त बिहान हुँदैछ ।" Aakarpsot ji chhuyo chattakai yo line harule.. Katha Kathmandu le......
Prabesh Poudel "उजेली" November 12, 2010 at 4:28 AM
मिलन November 12, 2010 at 4:28 AM